कुन ठाउँमा पानीको स्रोत राम्रो हुन्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
कुन ठाउँमा पानीको स्रोत राम्रो हुन्छ ?
ज्यो. बलराम उपाध्याय खकुरेल
मानिसलाई जीवनमा पिउन वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पानीको निकै महत्व हुन्छ । या भनौँ पानीबिना मानिस बाँच्न पनि सक्दैन । त्यसकारण पानी पनि मानिसको जीवनमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यही सत्यलाई वास्तुशास्त्रले पनि स्वीकारेको छ ।
घर वा आवासमा पानीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा वास्तुशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ । नयाँ घडेरीमा बनाइने एक तले घर वा धेरै तले अपार्टमेन्ट होस् पानीको व्यवस्था त गर्नैपर्छ। यसका साथै विद्यालय, मन्त्रालय वा कुनै पनि मानवीय संरचनामा पानीको आवश्यकता पर्छ नै । यी हरेक संरचना निर्माण गर्नुअघि नै पानीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ ।
वास्तुशास्त्र अनुसार संरचना निर्माण गर्ने जमिनमा बोरिङ्ग, कुवा वा अन्य श्रोतबाट पानी निस्कन्छ कि निस्कँदैन ? वा कति खनेपछि जमिनको पानी भेटिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि पानीको स्वाद कस्तो छ, कस्तो गन्ध आएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर पानीको सहज व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा वास्तुशास्त्रमा बताइएको छ ।
कुनै पनि संरचनाको पूर्व दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा र पश्चिम उत्तर दिशामा पानीको ट्याँकी, कुवा वा पानीको श्रोत राख्नुहुँदैन । पानी ट्यांकी वा पानीको श्रोतको लागि पूर्व उत्तर अर्थात् इशान दिशालाई उपयुक्त र सही दिशा मानिएको छ । यदी इशानमा पानीको लागि ठाउँ मिलाउन नसक्ने अवस्थामा उत्तर र पूर्व दिशालाई पनि पानीको श्रोतका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आग्नेय कोण र दक्षिण दिशामा कहिले पनि पानीको कुनै पनि श्रोत बनाउनु राम्रो मानिँदैन ।
पश्चिम दिशालाई जलका मालिक वरुणको स्थान मानिने भएकाले पानीको लागि पश्चिम दिशा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै पनि संरचनाको बिचको भागलाई ब्रह्म स्थान मानिने भएकाले घर वा संरचनाको मध्य भागमा कुनै पनि कुरा राख्नु वा पानीको श्रोत बनाउनुलाई वास्तुशास्त्रमा निषेध गरिएको छ । मध्य भागमा कहिले पनि खाल्डो बनाउनु हुँदैन ।
बोरिङ्ग, कुवा इनार आदि पानीको श्रोतहरु निर्माण गर्नको लागि माघ, फागुन, मंसिर, जेठ, कार्तिक र वैशाख महिना राम्रो हुने कुरा वास्तु शास्त्रमा बताइएको छ । बृहत् संहिता ग्रन्थका अनुसार चन्द्रमासँग पानीको सम्बन्ध हुने भएकाले चन्द्रमाको अवस्था अनुसार द्वितीया, अष्टमी, पञ्चमी, एकादशी तथा चतुर्दशी तिथिमा कुवा, इनार आदि खन्नु अशुभ मानिन्छ । यी बाहेकका दिन मा शुभ मुहुर्त हेरेर खन्नु राम्रो हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ ।